AKWESKWỌ OBODO AKW→KWỌ → Obere obodo ☆ Metalco ☆ Bellitalia
AKWKWỌ OZI OZI
AKWKWỌ OZI OZI - anyị bụ naanị ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ Italiantali na ahịa Polish:
Metal • Bellitalia • OGWU obodo
Anyị na-akpọ ndị niile nwere mmasị ka ha jikọọ anyị aka ụlọ ihe owuwu i ndị na-ese ihe, ozugbo anyị ma ọ bụ site na Ala Ojiji uloanyi bu onye otu na akwado ya.
Anyị na-akpọkwa gị òkù n'isi ụlọ ọrụ ọhụrụ anyị dị na Warsaw na ul. Fort Służew 1b / 10 na akụkọ ihe mere eme, pụrụ iche Nkera asatọ.
Ọ bụ ebe a ka a ga-ahazi nzukọ na nzukọ maka ndị mmekọ anyị na ndị ahịa anyị na ntinye nke ndị na-atụgharị uche Italiantali.
Igwe - bụ ụlọ ọrụ Italiantali hiwere na 1984.
Companylọ ọrụ ahụ sokwa n’otu a Bellitalia i OGWU obodo.
Ọganiihu azụmahịa nke METALCO bụ nsonaazụ nke nyocha na ahụmịhe na-aga n'ihu na ngalaba nke imewe, imekọ ihe ọnụ na ndị nrụpụta ụlọ na nke kachasị mma, yana iji teknụzụ na ihe ọhụụ.
A na-eji ngwaahịa METALCO mara ụdị mmadụ na imewe ya, nke, jikọtara ya na ezigbo ọmarịcha, ịmata ọdịiche dị na ahịa dị gburugburu ụwa. A na-eme usoro mmepụta na usoro teknụzụ niile na nkwanye ùgwù maka ụkpụrụ nke omumu ihe na gburugburu ebe obibi.
Anyị na-akpọ gị oku ka ị kwado ọnụ.
Bellitalia bụ ụlọ ọrụ ,tali, akụkụ nke METALCO otu, guzobere na 1962.
Na - ewepụta ihe dị n’ime ụlọ ihe eji arụ ọrụ mebere obodo site na ụdị ihe dị iche iche, PDM, HPC, UHPC, Granite na okwute mabulite, yana patted na patted. IWU IMETA.
Ọ bụ akụrụngwa na-agbanwe agbanwe na-enye gị ohere ịmepụta ụdị ọ bụla nke ike dị elu na ịdịte aka.
Ọ bụ ama maka nchịkọta ndị pụrụ iche ite ifuru i oche, oche nwere akụkụ ọhụụ na-enweghị atụ, na-atụ ihe karịrị tọn 3,5 na ihe mara mma nke granite eke ma ọ bụ mabul.
A na-erere ha nke ọma n'ụwa niile dị ka ngwaahịa pụrụ iche n'ihi usoro nyocha na nhazi nke teknụzụ dị elu.
Imewe obodo bụ ụlọ ọrụ includedtali gụnyere na Otu Metalco na-esote BELLITALIA.
Ọ mejupụtara ụlọ ọrụ ụmụnna nwanyị abụọ dị ukwuu.
Ọ bụ ụlọ ọrụ na-eto eto nke ndị na-eto eto ndị mepụtara mkpokọta ya, ndị na-enye echiche dị iche iche maka nchịkọta ha, bụrụ onye nkwado dị ukwuu na ngwaahịa nke ndị ọrụ ibe okenye ochie nwere ahụmahụ sitere na Metalco.
Ngwaahịa ya dị oke ọnụ karịa ka a na-enwe njiri mara mma, ogo na ịdịte aka.
Ngwa ahịa ndị ọzọ